Ulo ahia 36V 350W Electric Road Bike | ebike Shuangye
Mbido ngwaahịa igwe eletrik eletrik igwe eletrik 36V 350W igwe eletriki igwe eletriki igwe eletriki hydraulic 160
Motor: 250w / 350w moto na-enweghị ntụpọ
Batrị: 36v 8ah / 9.6ah batrị zoro ezo
Oke ọsọ: 30 - 45km / h
Ugbo Max: 40-60 km
Max Ibu Ibu: 80-120 kgs
Oge nkwụ ụgwọ: 7-8 awa
Gear: Shimano 7/9/21/27 gia
Usoro breeki: breeki diski hydraulic 160mm
Ntughari: Ntughari mkpirisi
An eletrik igwe eletrik nwere ike ime ka ndị na-agba ịnyịnya na-agba ngwa ngwa na n'ihu maka obere mbọ. Thisgbọ okporo ígwè ndị a ga-eme ka ibu dị na njem ọzọ ma ọ bụ njem otu ọzọ. Ugbo ala eletrik a banyere ihe bara uru na nke bara uru na-enye uzo ozo maka uzo ozo. 700C na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè, ụzọ abụọ - Pedal Assist na Throttle Assist. Jiri ịnyịnya na-agba n'okporo ụzọ na ụzọ dị larịị na-atọ ụtọ ọsọ na-atọ ụtọ.
Ejiri igwe 250w ma ọ bụ 350w na igwe eletriki igwe eletriki eletriki iji mee ka ọ dị elu, ọ dị mfe iru ọsọ ọsọ 25-32km / h. Ọbụna ma ọ bụrụ na n'okporo ụzọ ugwu, ugwu ụkwụ ma ọ bụ n'okporo ámá dị larịị, igwe eletriki igwe eletrik na 250w / 350w igwe eletriki na-enye ike zuru oke maka ndị na-agba ịnyịnya iji gboo mkpa ịgba ígwè ha.
Batrị lithium 36v zoro ezo na-eme ka igwe eletriki igwe eletrik a nwere ike ịnya 40-60km max nso na otu ụgwọ. Naanị awa 5-7 nwere ike ịkwụsị ụgwọ zuru ezu.
Ihe ngosi LCD na etiti aka iji mee ka ọhụụ kachasị mma maka ndị na-agba ịnyịnya. Ewezuga PAS-larịị PAS na ihe ngosi ọkụ n'ihu, enwerekwa ọtụtụ data nke igwe eletriki igwe eletrik kachasị mma, dịka ọmụmaatụ, ike moto, na-anọgide na batrị, ngụkọta njem, okpomọkụ, ọsọ ọsọ na ndị ọzọ. O nwekwara njirimara mmiri, ọbụlagodi na mmiri na-ezo, ị naghị atụ egwu mmiri na-abanye ma na-emebi ihe ngosi.
Wheelgbọ ụkwụ ihu na azụ na-eji usoro breeki hydraulic 160, ọbụlagodi na mmiri ma ọ bụ oyi ma ọ bụ ihu igwe ma ọ bụ ọnọdụ mberede, ọ nwere ike inye ike braking siri ike ozugbo. Ma jiri ntọala ọsọ ọsọ na-aga n'ihu wiilị ụkwụ, ọ dị mfe iwepu wiilị dị n'ihu mgbe ịchọrọ. Enwekwara ike ịme breeki arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị karịa igwe eletriki igwe eletrik, gaa siri ike taya igwe eletrik igwe, 18 ọsọ okporo ụzọ ebike, n'ibu diski breeki ụzọ e-bike
Tags:okporo ụzọ anyịnya igwe 350W okporo ụzọ ebike
Mbụ: 700C siri ike rọba taya ụzọ ụgbọ ala A6-R
Next: Pụrụ iche igwe kwụ otu ebe electric 700C * 35C